by pamusoro 18-12-04
Masiraidhi vari egirazi kana Goldstone emasiraidhi kuti zvinhu kuonekwa nemaikorosikopu. Kana achiita muenzaniso, masero kana zvinyama emasiraidhi anoiswa pamusoro girazi nemasiraidhi uye coverslip anoiswa pariri kuti pakuongorora. Optically, girazi-kufanana jira akashandisa kusika chimwe chinhanho musiyano. 1, zodzera nzira iri ...
Maikorosikopu Objective Knowledge Of The Pfungwa Huru
Limited kureba pamwe 160 chubhu urefu chinangwa The musiyano: 160 chubhu kureba chinangwa izvo haagoni kuchinja Manyiminya kure kwayo, uye kusaverengeka chinangwa izvo zvinogona kuwedzera rumwe mano; dzakadai zvipenyu maikorosikopu kana zviri zvikuru chinangwa izvo, unogona kuwedzera fluorescent mudziyo, ...
Kune zvitatu telecentric lenses: 1. chinhu-divi telecentric izvo - chinhu telecentric izvo ndiyo aperture diaphragm muNzvimbo Manyiminya hurongwa nomufananidzo divi zvatichiri ndege, kana aperture diaphragm yakaiswa pamusoro mufananidzo mundege zvatichiri ndege, kunyange kana chinhu kure kuchinja ...
Eukaryotic tusingaoneki ive Kamudzira-akasungwa muchitokisi organelles uye anosanganisira notumwe uye protists, asi prokaryotic zvinenge-zvose zviri tusingaoneki-vari conventionally semhosva kushayikwa Kamudzira-akasungwa organelles uye anosanganisira eubacteria uye archaebacteria. Microbiologists traditionall ...
by pamusoro 18-08-31
Insect specimens nokuti pakuratidza Anonyanyowanika kushandiswa popularizing zvipembenene ruzivo, kudzidzisa uye kushanyira. Kurimwa nzira ndechokuti specimens nezvipembenene vari yakarongwa pashoo chiratidzazvizhinji bhokisi maererano Makuriro hurongwa upenyu, zvakadai mazai, akasiyana makore mazana, pupa ...
The Method Of Kuita The saibva Insect inoenderera
Vazhinji specimens akachengetedzwa saibva tumbuyu vari Protoceratops, Eupolyphaga, Pteris halibut, Oystrus, uye Ophiopogon japonicus, Eupolyphaga, et unto., Eggs uye mazana ose nymphs rakatsauka tumbuyu kurarama mumvura, Pupa uye zvichingodaro. Kuitira kuti tupukanana kunyorova pashure kwete akaremara, aft ...
Somushonga Solution Recipe Of The zvakakangwa Plant Specimens
(1) Chinangwa zvavo kunyudza mu zvisaora. 70% doro kana 5 ~ 10% formaldehyde mhinduro. Doro impregnation inogona kwenguva refu Kuchengetedzwa, asi nyore chibis; formaldehyde aqueous mhinduro husingakoshi, asiwo kuponesa imwe ruvara, asi mhinduro iri nyore tsvuku. muchero Large ...
Paraffin chikamu nzira iri anokosha muitiro, wokutanga wakaiswa zvinyama wakagezeswa nokuda rokuongorora, kupera mvura mumuviri (pamwe kuwedzera kuwanda panyaya iyi, etc.), segirazi (pamwe xylene, etc.), Baptist Paraffin (Paraffin) midzi wakisi kutigumbura, sliced ​​uye yakasvibiswa slicing muchina uye akaita kupinda Sl ...
Kune vakawanda dzakasiyana kuti biopsy specimens, izvo zvinogona rakakamurwa mhando mbiri: asiri slicing nzira uye slicing nzira: asiri slicing nzira, akadai zodzera, tichigadzira, tableting, nokuikuya akakokera; slicing nzira zvinosanganisira Paraffin Slice nzira, collodion bande nzira, nechando chik ...